NLD နာယက ဦးတင်ဦးအား ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင် ၀ါကာအူးဒင်းက တောင်းပန်ခိုင်းသည့် RFA အင်တာဗျူး အသံဖိုင် ~ Myanmar Express
NLD နာယက ဦးတင်ဦးအား ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင် ၀ါကာအူးဒင်းက တောင်းပန်ခိုင်းသည့် RFA အင်တာဗျူး အသံဖိုင်
တိုင်းပြည်သာပျက်ပါစေ... ဆောက်ကုလားတွေ အကုန်သတ်ပစ်မယ်...း(((x-
စောက်ရူး RFA VOA BBC အကုန် စောက်ရူးတွေ စောက်ဆံ ရရင် အကုန်ပေးပြောနေတဲ့ခွေးတွေ....ခွေးမီဒီယာတွေ...
ငါစောက်ရမ်း စိတ်ညစ်နေပီ...သမိုင်းလည်းပြောသေးတယ် ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်တွေ နှစ်၁၀၀၀ လောက်ရှိမယ်တွေ ဆိုပြီးပြောနေပါလား? တော်တော် တိကျနေပါလား?
ma aye lo gyi,sout ka lar tway.Rohingya ko mway htal ka ta kar mha ma kyar phu bu.Ka lar tway ka 1000years htal ka sheet gal yin,myanmar so tar sheet mhar taung ma hote bu.Sout ka lar gyi lar nyar nay tal.
NLD နာယက ဦးတင်ဦး no need to say sorry to ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင် ၀ါကာအူးဒင်း because they don't have any country that right understand
6 June 2012 11:26
http://koaungpaing.com စောက်ကုလားများကို သတ်မည့် သခင် အောင်ပိုင်
6 June 2012 12:23
6 June 2012 12:42
ကလားနိုင်ငံမှာ မြန်မာလူမျိုးအတွက် လူမျိုးတစ်စု လုပ်မပေးနိုင်သလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကလားတွေအတွက် လူမျိုးတစ်စုနေရာဘယ်လိုပေးနိုင်ပါ့မလည်းကလားရယ်စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါ
6 June 2012 13:06
fuck off kalar.
6 June 2012 13:08
fuck off waka udin.go back to arab.we don't need you.take all your kalar to your origin.you all are shit for us.GO BACK.
6 June 2012 15:06
အလကား၊ စောက်ကုလား ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်လို.။ ရာရာစစ ရိုဟင်ဂျာ အခွင့်အရေးတဲ့..အမဲအိုးနှယ်ဟင်းအိုးမှအားမနာ..
လီးမို့လို့ ကုလားကို တောင်ပန်၇မှာလဲ .. အခြေ မ၇ှိ အနေမ၇ှိတဲ့ ကောင်တွေက လာပီး ခိုနေသေးတယ် ငါတို့က ပြန်ပီး တောင်းပန်၇ အုံးမယ် ဆိုတော့ စဉ်းစား ပီးလဲ ပြောအုံးဟ
6 June 2012 18:42
အောင်မှာ..ရာရာစစ.စောက်ကုလားတွေ..ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်..အမဲရိုးနှယ် ဟင်းအိုးမှအားမနာ..ရိုဟင်ဂျာအခွင့်အရေးတဲ့..ဟား ဟား ဟား ရိုဟင်ဂျာအခွင့်အရေးတော့မရဘူး..ဒါပဲရမယ်။
6 June 2012 20:05
ဒီကောင်တွေကို အခုကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ရမယ်
7 June 2012 08:10
အခြောက်ကြီး အူးဒင်း ပြောတာ ကြားလိုက်ပါတယ်.. ၇ိုဟင်ဂျာတွေက ၇ခိုင်ကို မုန်တိုင်းမိပီး ခဏခို ပီးရင် မုန်တိုင်းစဲသွားတော့ ဘာလို့ ကိုယ့် နိုင်ငံ ကိုယ် မပြန်ကြတာလဲ .. အူဒင်း ပြောတာ ၇ှင်းနေတာပဲ အဲ့ဒီ ၇ိုဟင်ဂျာတွေက မြန်မာ နိုင်ငံသားမှ့ မဟုတ်တာ.. အဲ့ ဒီတော့ အူဒင်ရေ.. မင်းပဲ ဦးဆောင်ပီး အဲ့ ကုလားတွေကို မင်းအပါဝင် ကိုယ့် နိုင်ငံ ကို ပြန်ကြဖို့ RFA ကနေ တိုတ်တွန်း ပေးတော့လေ
မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပိုင်တဲ့နေရာဆိုတာကို တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ကုလားတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသား ပြောသင့်ပြီ။
7 June 2012 09:30
မုန်တိုင်းမိပြီး ရခိုင်ဘက်ကမ်းကို ရောက်လာတဲ့သူတွေက ရခိုင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရောတဲ့လား အသေအချာလည်းပြောပါ ဒေါက်တာကြီးရယ် ။ရေမြောကမ်းတင်လူမျိုးဆိုတာ မကြားဘူးဘူးလား အဲဒီလိုလူမျိုးကိုခေါ်တာပါ။ ခင်ဗျားက ဒေါက်တာဘွဲ့နဲ့ မတန်သေးပါဘူး
7 June 2012 15:35
သူတို့ ကို ထိတော့ နာတတ်လိုက်တာ ဒီထက်နာအောင် လုပ်ပေးလိုက်ကြပါ ကုလားစုတ်တွေကို
8 June 2012 13:11
ကုလားတွေကို ၀ကိဆီလိမ်းပီး နေလှမ်း အပေါ်ယံ အရေပြား တင်းလာရင် လေးဖက်လေး ကုန်းခိုင်ပီး စအိုကို အစိမ်းလိုက် ဆောက်ဆောက်ပီး လိုးပေးချင်တယ်.. အသားမဲတော့ စီးပီး ဒူလာကောင်းတယ် လို့ကြားထားဖူးတယ်... ပြောနေရင်းနဲ့ အ၇ည်ကြည်...အာ..အာ..လုပ်ပါအုံး ထွက်ကျ ကုန်ပီး.. ကုလားမကိုလဲ အဲ့လို နည်းနဲ့ စအိုကွဲ ထံက်အောင် ချချင်တယ်.. မြအေးရေ မင့်သမီး ကို ဘယ်လောက်ပေးရင် ၇နိုင်ပါသလဲ.. ကုလား ထုံးစံအ၇ မင့် သမီးကို မင်း ဆွဲပီးပီ လား .. ဘယ်လိုနေ သလဲဆိုတာကိုလဲ ပြောပြအုံးဟ..
ကားသူခိုး ရှာဖ်ဇန်အလီနဲ့ အီဆာတော့ မိသွားပြီ သူတို့ အဖွဲ့ တွေကျန်နိုင်သေးတယ်
မေလ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က ထိုင်းနိုင်ငံမှ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့နယ် ထီးခီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းသို့ ရောက်ရှိ လာသော ထိုင်းနိုင်ငံ လှ...